Shirka Baydhabo ee 3 DG ee taagersan Madaxweyne Farmajo -by Culusow - Horseed Media • Somali News
September 10, 2020Opinion
Shirka Baydhabo ee 3 DG ee taagersan Madaxweyne Farmajo -by Culusow
Shirka wuxuu qayb ka ahaa ololaha Madaxweyne Farmajo ku kala qaybinayo Dowladda, shacabka, iyo beesha Caalamka si Soomaaliya ugu jirto qalalaase aan dhammaan, isla markaana aysan dalka ka dhicin doorasho xalaal ah waqtigeeda.
Madaxweynayaasha Laftagareen, Qoorqoor, iyo Waare waxay dagaal cad ku qaadeen Madaxweyne Sicid Deni iyo Axmed Madoobe. Dhusamareb-3 waxaa shir Guddoomiye ahaa Madaxweyne Farmajo, Puntland iyo Jubbaland wax eeda uma sheegan 3 DG. Waxay ka eed sheeganayeen Madaxweyne Farmajo ka Madaxweyne ahaan. Sidaa darted, ilaa hadda lama garan karo sababta 3 DG u weerareen 2 Madaxweyne DG ee saxiibada ahaayeen.
Shirka waxaa la muujiyay kala qaybsanaanta DG oo kala noqday 3 iyo 2, taasoo ka soo horjeeda hadafkii gogosha dhuusamareb iyo heshiiskii dhusamareb-1.
Madaxweyne Cabdicasis Laftagareen wuxuu caddeeyay inuu ahaa Madaxweynihii ka dambeeyay isu imaanshaha 5 DG ee ka dhacay dhusamareb-1, xogtaasoo khilaafsan xog horey loo haystay, isla markaana tuhun cusub abuuri doonta.
Shirka ma aheyn mid siyaasadeed ee wuxuu ahaa shir lagula ficiltamayo Madaxweyne Sicid Deni iyo Madaxweyne Axmed Madoobe, laguna taagerayay madaxweyne Farmajo.
Madaxweyne Cabdicasis Laftagareen oo sheegtay inuu ka dambeeyay isu imaatinka DG wuxuu maanta horseed ka noqday kala tagga iyo kala aamin baxa DG, taaso khilaafsan dastuurka iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed. Madaxdu arrin siyaasadeed waa isku khilaafi karaan, haseyeeshe waxaa ceeb ah qabashada shir ujeedadiisu tahay weerar shakhsiyadeed Madax shaqo ka dhexeyso.
Shirka wuxuu dhagax dhig u ahaa inaan lagu heshiin shirka Muqdisho, isla markaana la carqaladeeyo in dhusamareb lagu saxiixo Heshiiska kama dambeysta ah.
Madaxweyne Laftagareen wuxuu sheegay in 3 DG sameysan doonaan isbahaysi xagga nabadgelyada. Waa dib u dhac xagga siyaasadda iyo nabadgelyada iyo wada shaqeynta DG dhexdooda iyo DF iyo FG. Dhinaca kale, Galmudug iyo Puntland waxay leeyihiin isbaheysi; Hirshabelle iyo Puntland waxay leeyihiin isbaheysi; Jubbaland iyo Puntland waxay leeyihiin isbaheysi.
Thanks, Dr Mohamud M Culusow for your indepth article regarding current situation in Somalia Politically and Security conditions throughout of the country.